Track 5: You Don't Know — njem Lee - Official Site
The ụzọ ị nwetara m elu ka m na-adịghị ahụ m agbadata
Ọ bụrụ na ị maara ihe m na-ebe, ma na m na ka ha guzo now
Na ị maara na m anaghị eche banyere enweghị ịkpọasị
Ndị a na ígwé ojii na-eche ihu m
M ga-esi elu, elu, elu
Ị na-amaghị ihe o mere maka m
Ị na-amaghị (5X)
Gliding elu na-eme m ka free
Ọkọdọ m na-eche dị ka Cleveland mgbe ha kwuru na Lebron azụ
I wanna otutu parades na streamers na ihe nile, Eme m ka mma
Ma ọ bụrụ na ị na-agụ na King James
Ị nwere ike ikwu m feeleth mma, forgetteth n'obi mmiri ozuzo
Ichefu banyere mmiri ruo n'ígwé ojii n'elu isi m
Bruh m ike na-eche n'ala, ọ dịghị anchors na m ụkwụ
M na-akpagharị nnọọ anya taa na-enweghị dịghị bed
Ụkwụ nghọta dị ka ụfọdụ atụ ụjọ ya, ma unu adịghị ighikota ihe m kwuru
Mgbe m na-ekwu na m na-ese n'elu mmiri ka elu dị ka mgbe
M na-apụtaghị na Denver mile elu uzu, M nwere ike ime ka mma
M na-eme ọ bụghị ọhịa na ha oké abalị na nkwari, M nwetara ruo mgbe ebighị ebi
Na Onye Kasị Elu m kụrụ jackpots na-enweghị dịghị menjuobi
Hapụ m ka o doo anya, nanị Chineke m atụ egwu
Bi n'ime a elu na ebe nsọ na nwanne Ọ nwetara m ebe a
Mkpụrụ obi m ọkọdọ zụrụ na mmehie m ọkọdọ ụkwụ gawa
Ọ gaghị anọ dịghị alaghachi, kwadebe maka bupụ
Brandon • December 9, 2014 na 5:24 Abụ • zaghachi
Abụ a… Ka Chukwu gozie gi ije nke ukwuu. I gdina kwa aru ike, ọ buru na Onye-nwe-ayi kwuru otù ihe a.
Jimmy • January 21, 2016 na 3:00 pm • zaghachi
Naanị ihe ijuanya – na-eme akụkụ banyere “Obama Biden” nke putara na i toro vootu ma obu kwadoo ndi ochichi nke Obama? Dị ka a Christian, Ọ ga-amasị m ịkwado onye isi ala ndị America – mana o dochaghị anya na Obama na-akwado ụfọdụ ihe adịghị asọpụrụ Chineke? Echere m na ị na-eji ọrụ n'aka, mana tupu oge eruo maka ntụle gị.